အားပေးခဲ့ကြတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကို သတင်းကောင်းလေးမျှဝေပေးလာတဲ့ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင် စင်ဒီယာ – Shwe Likes
အားပေးခဲ့ကြတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကို သတင်းကောင်းလေးမျှဝေပေးလာတဲ့ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင် စင်ဒီယာ
Shwe | December 3, 2021 | Celebrity | No Comments
ပရိသတ်ြ ကီးရေ စင်ဒီယာ ကတော့ ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယို ဇာတ်ပို့ဇာ တ်ရံတစ်ေ ယာက် အနေနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုကို အပြည့် အဝ ရရှိထားတဲ့ ပရိသတ်အ ချစ်တော်တ စ်ယောက် ပဲဖြစ်ပါ တယ်။
ပရိသတ်တွေ ရဲ့အချ စ်တော် စင်ဒီ ယာကတော့ သူ့ရဲ့ချစ်သူ နဲ့ ရွှေလက်တွဲလို က်ပြီဖြစ်ကြောင်း သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရ က်စာမျ က်နှာကနေ မျှဝေဖော်ပြ လာခဲ့ပါတယ်။
စင်ဒီယာ ကတော့ သူ့ရဲ့ချစ်သူ နဲ့ မနေ့က ဒီဇင်ဘာလ (၂)ရက်နေ့က တရာရုံးမှာ ထိပ်မြှားလက် ထပ်မော် ကွန်းတင်လက် မှတ်ရေးထိုး ခဲ့တာဖြစ် ပြီး သူရဲ့ လူမှုကွ န်ရက်စာမျက်နှာ ကေ နပြီတော့ ချစ်သူလေးနဲ့ ရွှေလ က်တွဲလက်မှ တ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ အကြော င်းကို “ဟုတ်ကဲ့ ယူလိုက်ပါပြီ” လို့ မင်္ဂလာလ က်မှတ်ေ ရးထိုးခဲ့တဲ့ ပုံလေးတွေနဲ့အတူ မျှဝေဖော်ြ ပထားခဲ့တာပဲဖြ စ်ပါတယ်။
Congratulations ပါ စင်စင်ရေ…. ချစ်ရတဲ့ ခင်ပွန်းနဲ့ ရာသက် ပန်ရိုးမြေ ကျပေါ င်းဖက်နိုင်ပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားသား မီးမီးေ လးတွေလည်း ပိုင်ဆိုင်နိုင် ပါစေလို့ မင်္ဂလာဆုမွန်ေ ကာင်းတော င်းပေးလိုက် ပါတယ်နော်။ ပရိသတ်ကြီးတွေလည်း စင်ဒီယာတို့ ဇနီးမောင်နှံအတွက် မင်္ဂလာဆုမွန်ကောင်းတွေတောင်းေ ပးခဲ့ကြပါဦးနော်။
ပရိသတ္ျ ကီးေရ စင္ဒီယာ ကေတာ့ ႐ုပ္ရွင္နဲ႔ ဗီဒီယို ဇာတ္ပို႔ဇာ တ္ရံတစ္ေ ယာက္ အေနနဲ႔ ပရိသတ္ေတြရဲ့ အားေပးခ်စ္ခင္မႈကို အျပည့္ အဝ ရရွိထားတဲ့ ပရိသတ္အ ခ်စ္ေတာ္တ စ္ေယာက္ ပဲျဖစ္ပါ တယ္။
ပရိသတ္ေတြ ရဲ့အခ် စ္ေတာ္ စင္ဒီ ယာကေတာ့ သူ႔ရဲ့ခ်စ္သူ နဲ႔ ေရႊလက္တြဲလို က္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သူ႔ရဲ့လူမႈကြန္ရ က္စာမ် က္ႏွာကေန မၽွေဝေဖာ္ၿပ လာခဲ့ပါတယ္။
စင္ဒီယာ ကေတာ့ သူ႔ရဲ့ခ်စ္သူ နဲ႔ မေန႔က ဒီဇင္ဘာလ (၂)ရက္ေန႔က တရာ႐ုံးမွာ ထိပ္ျမႇားလက္ ထပ္ေမာ္ ကြန္းတင္လက္ မွတ္ေရးထိုး ခဲ့တာျဖစ္ ၿပီး သူရဲ့ လူမႈကြ န္ရက္စာမ်က္ႏွာ ေက နၿပီေတာ့ ခ်စ္သူေလးနဲ႔ ေရႊလ က္တြဲလက္မွ တ္ေရးထိုးခဲ့တဲ့ အေၾကာ င္းကို “ဟုတ္ကဲ့ ယူလိုက္ပါၿပီ” လို႔ မဂၤလာလ က္မွတ္ေ ရးထိုးခဲ့တဲ့ ပုံေလးေတြနဲ႔အတူ မၽွေဝေဖာ္ျ ပထားခဲ့တာပဲၿဖ စ္ပါတယ္။
Congratulations ပါ စင္စင္ေရ…. ခ်စ္ရတဲ့ ခင္ပြန္းနဲ႔ ရာသက္ ပန္ရိုးေၿမ က်ေပါ င္းဖက္နိုင္ၿပီး ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ သားသား မီးမီးေ လးေတြလည္း ပိုင္ဆိုင္နိုင္ ပါေစလို႔ မဂၤလာဆုမြန္ေ ကာင္းေတာ င္းေပးလိုက္ ပါတယ္ေနာ္။ ပရိသတ္ႀကီးေတြလည္း စင္ဒီယာတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံအတြက္ မဂၤလာဆုမြန္ေကာင္းေတြေတာင္းေ ပးခဲ့ၾကပါဦးေနာ္။
ချစ်ရတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေ အတွက် မွန်မြတ်အားပါလှတဲ့ နှစ်သစ်ဆုတောင်းလေး ပေးခဲ့တဲ့ ခင်ဝင့်ဝါ
ရေမွန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လုပ်စားတာတွေ ရပ်ပါတော့လို့ ခင်မြတ်မွန်နဲ့လပြည့်ကဗျာကို ထုတ်ပြောလိုက်တဲ့ အောင်လ
သူ့ရဲ့ချစ်သူ အချောလေးကို ဖခင်ဖြစ်သူခင်လှိုင်ရဲ့ မွေးနေ့မှာ စပရိုက်လုပ်ကာ လက်ထပ်ခွင့်ေ တာင်းခဲ့တဲ့ နေရဲရဲ့ဗီဒီယိုလေး
လတ်တလော ကိုဗစ်ရောဂါ ကူးစက်ခံရပြီး ခံစားနေရတဲ့ သူမရဲ့ရောဂါဝေဒနာ အကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ဝါဆိုမိုးဦး